အဘမန်း… ဘာလဲ!!!! အဘမန်း… ဘယ်လဲ !!!! (၂) | Democratic Wave
အဘမန်း… ဘာလဲ!!!! အဘမန်း… ဘယ်လဲ !!!! (၂)
Posted by Demo Wave , at 10:08 AM2comments
၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၇ ရက်နေ့မှာ ကျင်းပတဲ့ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် တတိယ ပုံမှန် အစည်းအဝေးရဲ့ (၆) ရက်မြောက်နေ့မှာ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဌ ဦးရွှေမန်းက ‘‘ကျောင်းဆရာ၊ ဆရာမတွေရဲ့ လစာနဲ့ စရိတ်၊ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များ၊ တပ်မတော်သားများ၊ ၀န်ထမ်းများနဲ့ အောက်ခြေ အုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ လစာနဲ့ စရိတ်တွေကို လုံလောက်စွာ ချီးမြှင့်ပေး ရမည်ဖြစ်ပါကြောင်း၊ နိုင်ငံတော် ကာကွယ်ရေး တာဝန် ထမ်းဆောင်နေကြတဲ့ လိုအပ်ရင် နိုင်ငံနဲ့ နိုင်ငံသားတွေ အတွက် အသက်ပေးစွန့်လွှတ်နေကြတဲ့ တပ်မတော်သားတွေရဲ့ ရိက္ခာ၊ စရိတ်၊ စစ်ဝတ်နဲ့ အသုံးအဆောင်စရိတ်တွေ အပါအ၀င် အခြားစရိတ်တွေ ကိုလည်း အနည်းဆုံး ၁၉၅၉-၁၉၆၀ ခုနှစ်က ရရှိထားတဲ့ စရိတ်တွေရဲ့ တန်ဖိုးအတိုင်း ရရှိအောင် ခွင့်ပြုပေးသင့်ကြောင်း’’ ကို ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ဦးရွှေမန်းရဲ့ တင်ပြချက်ကို နိုင်ငံတော် သမ္မတကိုယ်စား ဘဏ္ဍာရေး ၀န်ကြီး ဦးလှထွန်းမှ လစာတိုးမြှင့်မှုကို ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်မှာ ဆောင်ရွက်မယ်ဆိုရင် ပိုမိုကုန်ကျလာမည့် လစာနှင့် အခြားအသုံးစရိတ်တွေ များပြာားလာမှာဖြစ်လို့ နိုင်ငံတော် ဘတ်ဂျတ်မှာ အခက်အခဲတွေ့လာနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဝေးလံခေါင်သီဒေသများမှာ တာဝန်ထမ်းဆောင်နေကြတဲ့ ၀န်ထမ်းများကို ငဲ့ညှာထောက်ထားသောအားဖြင့် ၄င်းတို့ရဲ့ ဒေသစရိတ်နှုန်းထားများကို ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် စတင်တိုးမြှင့်ပေးနိုင်ရန် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း နိုင်ငံတော်သမ္မတကိုယ်စား ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်သို့ တင်ပြခဲ့ပါတယ်။
၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၁ ရက်နေ့တွင် ပြောကြားခဲ့သော နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီး၏ မိန့်ခွန်းတွင် ကျွန်တော်တို့ အစိုးရ အဖွဲ့ဟာ စတင်တာဝန်လွဲပြောင်းရယူချိန်ကစပြီး မြင့်မားတဲ့ လစာနှုန်းထားတွေကို ရယူခံစားခြင်းမပြုပဲ ယခင်အစိုးရ လက်ထက်က နှုန်းထားအတိုင်း ရယူခံစားနေကြသူတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံလုံးမှာ အစိုးရ၀န်ထမ်း အရေအတွက် စုစုပေါင်းဟာ တစ်နိုင်ငံလုံးလူဦးရေရဲ့ (၃.၃%)ခန့်ရှိတဲ့အတွက် ကျွန်တော်တို့ဟာ ပြည်သူအစိုးရဖြစ်တာနဲ့ အညီ အစိုးရ ၀န်ထမ်းမဟုတ်သော သာမန်လက်လုပ်လက်စား ပြည်သူ (၉၆.၇%) ကိုလည်း ပြန်လည်ငဲ့ကွက်ဖို့ လိုပါတယ်။ အခုဆိုရင် လစာတိုးပေးရေး ဆွေးနွေးပေးမှုတွေကြောင့် အရပ်ရပ်ကုန်ဈေးနှုန်းတွေ ရုတ်တရက် တက်လာတာကိုလည်း တွေ့ရှိရပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ လစာသို့မဟုတ် ထောက်ပံ့ကူညီမှုတွေ တိုးမြှင့် ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ ခြုံငုံစဉ်းစား ဆောင်ရွက်ပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဦးရွှေမန်းအနေနဲ့ သမ္မတထံ တောင်းဆိုချက်နဲ့ ပတ်သတ်ပြီးတော့ ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၂ ရက်နေ့က ရန်ကုန်မြို့မှာ မီဒီယာတွေနဲ့ တွေ့ဆုံကာ ၀န်ထမ်းများလစာတိုးရေးကိစ္စကို အဓိကထား ဆွေးနွေး သွားပါတယ်။ ဒီလိုဆွေးနွေးခဲ့ရာတွင် နိုင်ငံသားများ အနေနဲ့ ရဲရဲရင့်ရင့် သတ္တိရှိရှိဖြင့် ပြောဆိုရမှာဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ ဦးရွှေမန်းရဲ့ ပြောကြားချက်အကြောင်းကို မီဒီယာတွေကနေတဆင့် ပျံ့နှံ့ပြီးတဲ့နောက် ရန်ကုန်တွင် တိုင်ရီစက်ရုံမှ အလုပ်သမားများ အခွင့်အရေးတောင်းဆိုမှုများမှ စတင်ပြီး စက်ရုံများတွင် အလုပ်သမား အခွင့်အရေးလှုပ်ရှားမှုများ စတင်ဖြစ်ပေါ်လာရပါတယ်။ လွှတ်တော်မှာ ၀န်ထမ်းတွေ လစာတိုးပေးရေးကိစ္စကို တင်သွင်းစဉ်ကလည်း ဦးရွှေမန်းရဲ့သား တိုးနိုင်မန်းမှ တဆင့် မီဒီယာများသို့ ပိုမို ပြန့်ပွားအောင်ဆောင်ရွက်ခဲ့စေပါတယ်။ ဦးရွှေမန်းအနေနဲ့ ၀န်ထမ်းများ လစာတိုးရေးကိစ္စကို အကြောင်းပြ ပြီးတော့ အစိုးရကို ဖိအားတွေ တောက်လျှောက်ပေးလာခဲ့ပါတယ်။ မြစ်ဆုံရေအားလျှပ်စစ် စီမံကိန်းကို သမ္မတမှ လွှတ်တော်သို့ တင်ပြအတည်ပြုချက်မယူပဲ သမ္မတလုပ်ပိုင်ခွင့်အတွင်းမှ ရပ်တန့်ပေးခဲ့တာကို လည်း ဦးရွှေမန်းမှ အမြင်မကြည်လင်ခဲ့ပါဘူးဆိုတာ လွှတ်တော်တွင်းမှာ သတင်းတွေ ပျံ့နှံ့ခဲ့ပါတယ်။
ယခင် စစ်အစိုးရ လက်ထက်က ကုန်ဈေးနှုန်းကြီးမြင့်မှုကို လက်တလောပြေလည်စေဖို့ ၀န်ထမ်းတွေကို လစာတိုး ပေးခြင်းနဲ့ဖြေရှင်းခဲ့ပါတယ်။ ၁၉၈၉ခုနှစ်မှာ တစ်ကြိမ်၊ ၁၉၉၃ခုနှစ် မှာတစ်ကြိမ်၊ ၂၀၀၀ပြည့်နှစ်မှာ တစ်ကြိမ်၊ ၂၀၀၆ ခုနှစ်မှာ တစ်ကြိမ၊ ၂၀၁၀ပြည့်နှစ် ဇန်န၀ါရီလ တွင် တစ်ကြိမ် စုစုပေါင်း ၅ ကြိမ်တိတိ လစာတွေ တိုးပေးခဲ့ပါတယ်။ ၂၀၀၂ခုနှစ်မှာ ရွှေတစ်ကျပ်သားကို တစ်သိန်းတစ်သောင်းကျော်လောက် ပေးရပေမဲ့ ၂၀၁၂ ခုနှစ် ယနေ့ကာလမှာတော့ ၇၁၀၀၀၀ ကျော် ပေးရပါတယ်။ ဆန်ဆိုရင် လည်း ၂၀၀၂ခုနှစ်မှာ တစ်ပြည် ၂၈၀ ကျပ်သာ ပေးရ ပေမဲ့ ခုအချိန်မှာတော့ တစ်ပြည်ကို ၁၅၀၀ ကျပ်တောင်ပေးရလို့ ငွေကြေး ဖောင်းပွမှုဟာ ခြောက်ဆ လောက် အထိထိုးတက်လာတာကို တွေ့ရမှာပါ။ ဒီလိုလုပ်ဆောင်ခဲ့တာဟာ စစ်အစိုးရရဲ့ ငါးပွက်ရာငါးစာချလုပ်ဆောင်မှုကြောင့် နိုင်ငံတော်အနေနဲ့ ငွေကြေးဖောင်းပွနှုန်း မြင့်တက်ခဲ့ပြီးတော့ အခြေခံ လူတန်းစားတွေ ကုန်ဈေးနှုန်းကြီးမြင့်မှုဒဏ်ကို ခံခဲ့ရပါတယ်။ လစာတိုးလာပေမယ့် ကုန်ဈေးနှုန်းက လိုက်ပါမြင့်တတ်ခဲ့လို့ ဂျာအေး သူ့အမေရိုက် ဇာတ်လမ်း ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ၀န်ထမ်းတွေရဲ့ အခက်အခဲကို လစာ တိုးပေးလိုက်ရုံဖြင့် မဖြေရှင်းနိုင်ပဲ ငွေကြေး ဖောင်းပွမှုသာမြင့်တတ်လာခဲ့ပါတယ်။
ပြည်သူတွေရဲ့လိုလားချက်က လစာတိုးဖို့ မဟုတ်ပါဘူး ကုန်ဈေးနှုန်းကျဆင်းဖို့ပါပဲ။ လစာသာတိုးလာပြီး ကျန်တဲ့ကုန်ဈေးနှုန်းတွေ တက်လို့ ၀န်ထမ်းတွေပဲ ခဏတာ အဆင်ပြေပြီး ကျန် ၅၈ သန်းကျော် ပြည်သူတွေက ကုန်ဈေးနှုန်းဒဏ်ကို ခံရပါတယ်။ ၀န်ထမ်းတွေကလည်း လစာတိုးတာ နာမည်သာရှိပေမယ့် တကယ်တန်းကျတော့ ကုန်ဈေးနှုန်းတတ်တာနဲ့ ယှဉ်လိုက်ရင် မူလအတိုင်းပဲ မလောက်မငှ ပြန်ဖြစ်တာပါပဲ။ ဒါကြောင့် ဦးရွှေမန်းပြောတဲ့ လစာတိုးပေးဖို့ဆိုတာက ပြည်သူကို အပေါစား စည်းရုံးလိုက်တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ လစာတိုးပေမယ် ဒါပေမယ့် နိုင်ငံတော်က ကုန်ဈေးနှုန်းကို ဘယ်လိုတွေ ထိန်းချုပ်ပေးမယ်ဆိုတာတွေ မပါပဲ လစာတိုးပေးမယ်ဆိုတာချည်းပဲ ပြောနေတော့ ပြည်သူ ၅၈ သန်းကျော်ကို ဒုက္ခရောက်အောင်လုပ်နေသလိုပါပဲ။ တကယ်စေတနာထားတာ မဟုတ်ပဲ စီးပွာရေး ကမောက်ကမဖြစ်အောင် လုပ်နေတာလို့ ပြည်သူတွေက ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဌ ဦးရွှေမန်း တောင်းဆိုတဲ့ ၀န်ထမ်းများ လစာတိုးမြှင့်ပေးရေး ကို လိုက်လျောခြင်း မရှိပေမဲ့ နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်က ၀န်ထမ်းတွေ အားလုံးကို ထောက်ပံ့ကြေးငွေ အဖြစ် တစ်လလျှင် ၃၀၀၀၀ကျပ်စီ ၂၀၁၂ ဧပြီလက စတင်ပြီးတော့ ထောက်ပံ့ ပေးခဲ့ပါတယ်။ ဒီလို ထောက်ပံ့ပေးဖို့အတွက် နေပြည်တော်ကောင်စီရဲ့ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းတွေ၊ မြန်မာနိုင်ငံစက်မှုဖွံ့ဖြိုးရေး ၀န်ကြီးဌာန ဘက်ဂျက်တွေအပြင်အခြားဝန်ကြီးဌာနတွေရဲ့ဘက်ဂျက်အချို့ကိုလျှော့ချပေးခဲ့ရပါတယ်။ ဒါ့အပြင် မတ်လ (၂၄) ရက် ရက်စွဲနဲ့ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်နာယက ထံသို့ ဦးရွှေမန်းက ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ရဲ့ ဆောင်ရွက်မှုနဲ့ပတ်သတ်ပြီးတော့ သ၀ဏ်လွှာတစ်စောင် ပေးပို့ခဲ့ပါတယ်။ သ၀ဏ်လွှာထဲမှာ ပြည်ထောင်စုအဆင့် ပုဂ္ဂိုလ်များရဲ့ ချီးမြှင့်ငွေ၊ အငြိမ်းစားလစာတွေကို တိုးမြှင့်ပေးခြင်းနဲ့ အမျိုးသား လူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင် ဖွဲ့စည်းခြင်းကိစ္စရပ်တွေကို ဥပဒေနဲ့အညီ ဆောင်ရွက်ခြင်း မရှိ ကြောင်း ဖော်ပြ ထားပါတယ်။
အဲဒီသ၀ဏ်လွှာပါ အချက်တွေနဲ့ပတ်သတ်ပြီးတော့ နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးက ဧပြီလ (၉)ရက်နေ့မှာ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကို သ၀ဏ်လွှာတစ်စောင် ပြန်လည်ပေးပို့ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီ သ၀ဏ်လွှာမှာ ပါဝင်တဲ့ ဖော်ပြချက်တွေကတော့ ပြည်ထောင်စုအဆင့် ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ လစဉ်ချီးမြှင့်ငွေကိုသာ လျော့ပေါ့ခံစားခြင်း ဖြစ်ကြောင်းနဲ့ ပင်စင်လစာကို တိုးမြှင့်ပေးခြင်းကလည်း နိုင်ငံတော်သမ္မတရဲ့ အခွင့်အာဏာ အတွင်းကပဲ ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်တာကြောင့် အမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင် ဖွဲ့စည်းခြင်းမှာ အုပ်ချုပ်မှု အာဏာ အရဆောင်ရွက်ခြင်း ဖြစ်ကြောင်းကို ပြန်လည်ရှင်းလင်းထားတဲ့ အချက်တွေပါဝင်ပါတယ်။
နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးက ရရှိမယ့် အခွင့်အရေးကိုတောင် အပြည့်အ၀မယူပဲ လစာကို လျော့ယူတာ ပြည်သူတွေ အပေါ်မှာ စေတနာထားတာပါ။ သမ္မတတစ်ယောက်ရဲ့ ရပိုင်ခွင့်တွေကို အပြည့်အ၀မယူပဲ နိုင်ငံတော်အတွက် လုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ ၀န်ထမ်းတွေရဲ့ အငြိမ်းစားလစာ တိုးမြှင့်ပေးတာက လည်း အငြိမ်းစားယူသွားတဲ့ ၀န်ထမ်းတွေကို လက်ရှိကုန်ဈေးနှုန်းနဲ့ ချင့်ချိန်ပြီး မတောင့်မတနေရအောင် စေတနာထားဆောင်ရွက်ပေးတာပါ။ ဦးရွှေမန်းလို သားတွေက ကုမ္ပဏီထောင် အဖေကလုပ်ပိုင်ခွင့်တွေပေး စတဲ့အလုပ်တွေနဲ့ ချမ်းသာနေတော့ ဒီပင်စင်လစာကို ဘယ်မက်မောပါ့မလဲ။ ဒါပေမယ့် အငြိမ်းစား ၀န်ထမ်းအများစုကတော့ ဘ၀ရဲ့ နေ၀င်ချိန်တွေမှာ မတောင့်မတ မကြောင့်မကြ နေနိုင်အောင် ဆောင်ရွက် ပေးတဲ့ သမ္မတကြီးကို ကျေးဇူးတင်နေကြပါတယ်။
လူ့အခွင့်အရေး ကောင်မရှင် ဖွဲ့စည်းပေးတာကလည်း လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအတွက် ဖွဲ့စည်းပေးထားတာပါ။ ပြည်သူတွေ ခံစားနေရတဲ့ မတရားမှု တွေကို ဖြေရှင်းပေးမယ့် ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ ဖွဲ့စည်းပေးထားတာဖြစ်လို့ နိုင်ငံတော်သမ္မတရဲ့ ပြည်သူတွေ အပေါ်ထားတဲ့ စေတနာကို ထင်ဟပ်စေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဦးရွှေမန်းကတော့ မြစ်ဆုံအရေးကတည်းက မကျေလည်မှုတွေကို အရင်းပြုပြီး ဥပဒေတွေ မူတွေနဲ့ သမ္မတရဲ့လုပ်ဆောင်ချက်တွေကို ဥပဒေနဲ့ မညီကြောင်း ပြောကြားခဲ့မှုအပေါ် ပြည်သူတွေက မကျေနပ် ကျပါဘူး။ ပြည်သူ့ အကျိုးကို ဆောင်ရွက်တဲ့ နေရာမှာ လူတွေ မူတွေ မလိုပါဘူး။ တကယ် အကျိုးရှိအောင် လုပ်ပေးချင်စိတ်အပေါ်မှာပဲမူတည်နေတာပါ။
နိုင်ငံတော်သမ္မတအနေနဲ့ ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းပေါ်မှာ လျှောက်လှမ်းနေတဲ့ မြန်မာ့လူ့ဘောင် အဖွဲ့အစည်းအတွက် ဥပဒေနဲ့အညီ ဆောင်ရွက်နေပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ နိုင်ငံရေး အပြောင်းအလဲကို တည်ငြိမ်အောင်ဆောင်ရွက်ပြီးတော့ တစ်ဘက်ကလည်း ပြည်သူတွေရဲ့ အကျိုးစီးပွားကို တိုးတက်အောင် ဆောင်ရွက်ပေးနေပါတယ်။ ဒီလိုဆောင်ရွက်နေတာကို ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဌ တစ်ဦးအနေနဲ့ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ခြင်း မရှိဘဲနဲ့ ဒီမိုကရေစီ ဘက်တော်သား အမည်ကောင်း ခံယူပြီးတော့ အစိုးရအဖွဲ့ကို ဖိအားပေးနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဌ ဦးရွှေမန်းဟာ DSA (၁၁)က ဖြစ်ပြီးတော့ ၁၉၈၈ အရေးအခင်းမှာ ဗိုလ်မှူး အဆင့်ပဲ ရှိပါတယ်။ ၁၉၉၇ ခုနှစ်မှာ ဧရာဝတီတိုင်း တိုင်းမှူးအဖြစ် ခန့်အပ်ခံရပြီး နောက်ဆုံး တပ်မတော် ညှိနှိုင်းကွပ်ကဲရေးမှူးရာထူးကို ရရှိခဲ့ပါတယ်။
ဧရာဝတီတိုင်း တိုင်းမှူး ဘ၀က သူ့သား အောင်သက်မန်း ပိုင်ဆိုင်တဲ့ ဧရာ-ရွှေဝါ ကုမ္ပဏီဟာ ဧရာဝတီတိုင်း တစ်တိုင်းလုံးရဲ့ ဓာတ်မြေသြဇာ ရောင်းချခွင့်ကို တစ်ဦးတည်း မူပိုင်ရရှိခဲ့ပါတယ်။ ခုလို အောင်သက်မန်းဟာ ဧရာ-ရွှေဝါ ကုမ္ပဏီနာမည်နဲ့ လုပ်ငန်းပေါင်းစုံကို လုပ်ကိုင်နေပါတယ်။ Red Link ဆိုတဲ့ ဆက်သွယ်ရေးကုမ္ပဏီနဲ့ ချယ်ရီ FM ကလည်း တိုးနိုင်မန်း ပိုင်တဲ့ ကုမ္ပဏီဖြစ်ပါတယ်။ တိုးနိုင်မန်းဟာ ယောက္ခမဖြစ်သူ အမျိုးသားလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးခင်ရွှေ ( ဇေကမ္ဘာ ) ရဲ့ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းတွေ ကိုလည်း နောက်ကွယ်ကနေပြီး လုပ်ကိုင်ပေး နေတာဖြစ်ပါတယ်။ တိုးနိုင်မန်းတို့မိသားစုရဲ့ အရှိန်ကို အသုံးပြုပြီး ဦးခင်ရွှေက မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်၊ ရွှေနံ့သာကျေးရွာအုပ်စုက လယ်ဧက ၁၀၀၀ ကျော်ကို လျော်ကြေးငွေ အနည်းငယ်ပေးပြီး သိမ်းယူပြီး ဇေကမ္ဘာစက်မှုဇုန် အပိုင်း (၃) ဆိုပြီးဖော်ထုတ်ကာ အကွက် ၁ကွက်ကို သိန်းရာချီပြီးတော့ ရောင်းစားဖို့ ကြံစည်နေပါတယ်။
ဦးရွှေမန်းဟာ သူ့သားတိုးနိုင်မန်းကို ပြည်သူ့လွှတ်တော်ရဲ့ ဥပဒေရေးရာနှင့် အထူးကိစ္စရပ်များ လေ့လာဆန်းစစ်သုံးသပ်ရေးကော်မရှင်မှာ အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် ထည့်သွင်းထားပါတယ်။ တိုးနိုင်မန်းဟာ အသက်ငယ်ရွယ်လို့ လွှတ်တော်အမတ်အချို့က မကျေနပ်ပါဘူး။ မြောက်ကိုရီးယား ခေါင်းဆောင် ကင်ဂျုံအီး ကွယ်လွန်ပြီးနောက် သူ့သား ကင်ဂျုံအန် ဟာ ခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာပါတယ်။ ဒါကြောင့် အဖေသေရင် သားဆက်လက် တာဝန်ထမ်းဆောင်မှာလား ဆိုတဲ့ မေးခွန်းတွေကလည်း ပြည်သူ့ လွှတ်တော်အတွင်းမှာ တီးတိုးပျံ့နှံ့ခဲ့ပါတယ်။ ဦးရွှေမန်းဟာ အမျိုးသားလွှတ်တော်ဥက္ကဌ ဦးခင်အောင်မြင့်နဲ့လည်း မကျေလည်မှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်။ အမျိုးသားလွှတ်တော်နဲ့ ပြည်သူ့လွှတ်တော်က တင်သွင်းပြီး ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်က အတည်ပြုခဲ့တဲ့ ဥပဒေမူကြမ်းကို နိုင်ငံတော်ခုံရုံးသို့ တင်ပြဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ဦးရွှေမန်း ဦးဆောင်တဲ့ ပြည်သူ့လွှတ်တော်က ကန့်ကွက်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီလို ကန့်ကွက်ခဲ့လို့ ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်ဥက္ကဌ အဖြစ် တာဝန်ယူရတဲ့ ဦးခင်အောင်မြင့်ရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ပယ်ပျက်စေပြီး ဂုဏ်သိက္ခာညှိးနွမ်းအောင် လုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့ အမျိုးသားလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးက ဝေဖန် ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အဘမန်းဟာ စစ်အစိုးရလက်ထက်က ထိပ်တန်းတာဝန်ကို ထမ်းဆောင်ခဲ့ပေမဲ့ အခုအခါမှာ ဒီမိုကရေစီ အရေးကို အကြောင်းပြပြီး လွှတ်တော်အတွင်းမှာ အာဏာကို တည်ဆောက်နေပါတယ်။ အစိုးရရဲ့ အတိုက်အခံအင်အားစုတွေနဲ့ အလွမ်းသင့်ပြီး ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီကို ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲကာလ မှာ ထိရောက်တဲ့ ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲမှုမလုပ်ခဲ့လို့ ပါတီဟာလည်း ရှုံးနိမ့်ခဲ့ရကြောင်း၊ ဒီလိုရှုံးနိမ့်မှုအပေါ်မှာ ပါတီဝင်အချင်းချင်းကလည်း မကျေနပ်မှုတွေရှိလာပြီး ပါတီအတွင်းနဲ့ လွှတ်တော်အတွင်းမှာ အဘမန်းကို နှုတ်ထွက်ပေးဖို့ ဖိအားတွေများပြားလာတယ်လို့ တီးတိုးဝေဖန်ပြောဆိုမှုတွေ ရှိလာပါတယ်။
အဘမန်းသာ နှုတ်ထွက်သွားပါက သူ့ သားတွေပိုင်ဆိုင်တဲ့ ဧရာရွှေဝါ ကုမ္ပဏီ၊ Red Link ကုမ္ပဏီ တွေအပြင် (ဇေကမ္ဘာ) ဦးခင်ရွှေရဲ့ လုပ်ငန်းတွေပါ ထိခိုက်လာနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အဘမန်း အနေနဲ့ ဖိအားတွေကို ဘယ်လိုရင်ဆိုင်ပြီးတော့ လွှတ်တော်ထဲဝင်ရောက်လာတဲ့ အတိုက်အခံပါတီ NLD နဲ့ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှာလား၊ ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီနဲ့ တပ်မတော်သား ကိုယ်စားလှယ်တွေဘက်ကပဲ ရပ်တည်ဆောင်ရွက် သွားမှာလား နိုင်ငံရေး အမြတ်ထွက်အောင် ဆောင်ရွက်မလဲ ဆိုတာကိုတော့ ဆက်လက် စောင့်ကြည့်ရမယ် လို့ အစိုးရအဖွဲ့ ကြားမှာ သတင်းတွေ ပျံ့နှံ့နေပါတယ်။
nyunt aung said...
Aba Mann should resign b4 our former SPDC leader U Than Shwe's family face some "unpleasant things' in the very near future.
Suu Kyi recalled her fond memories of Delhi, saying her parents had asked her to address Jawaharlal Nehru as Panditji.
In his biography of Suu Kyi, she went to Oxford University in 1964 to get “out from under the thumb of her very fierce mother”. When she failed to secure admission into the programmes of her choice, English and forestry, she studied philosophy and “ended up withavery poor degree,athird.”
She fell in love withaPakistani,”arelationship that “ended in tears.” She then moved to New York forajob at the United Nations and stayed there for three years, living withafamily friend who was onceafamous Burmese pop singer.
ဒေါ်စုအသက် ၁၈ နှစ်လောက်မှာ ပါကစ်စ်စတန်မွတ်စလင်နဲ့ ကြိုက်ခဲ့သတဲ့ကွယ်။